यसकारण ढल्यो बर्लिन पर्खाल ! – Ranga Pati
यसकारण ढल्यो बर्लिन पर्खाल !
दोश्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर हिटलरको नेतृत्वमा रहेको जर्मनी माथि पूर्व तिरवाट सोभियत संघको लाल सेनाले आक्रमण तीब्र वनाएको थियो भने पश्चिम तिरवाट अमेरिका, वेलायत र फ्रान्सको सेनाले आक्रमण तीब्र वनाएको थियो । यसै क्रममा जर्मनीको पश्चिम हिस्सा अमेरिका लगायत पूँजीवादी देशको नियन्त्रणमा गयो भने जर्मनीको पूर्वी हिस्सा सोभियत संघको नियन्त्रणमा गयो ।
विश्ययुद्धको समाप्तीपछि पश्चिम जर्मनीमा अमेरिका समर्थक पूँजीवादी सरकार वन्यो भने पूर्वी जर्मनीमा सोभियत समर्थक साम्यवादी सरकार वन्यो । यसरी जर्मनी दुई देशमा टुक्रियो ।
स्तालिनको नेतृत्वमा साम्यवादी देशहरुले ठिकै प्रगति गरिरहेको थियो । पूर्वी जर्मनीमा पनि ठिकै प्रगति भैरहेकाे थियाे । तर स्तालिनको सन् १९५३ मा निधन भएपछि सोभियत संघको नेतृत्वमा गम्भीर समस्या देखिन थाल्यो । सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको प्रमुख नेताको रुपमा ख्रुश्चेव आएपछि उनले सोभियत संघलाई पूँजीवादी वाटोमा लग्न थाले । नाम कम्युनिष्ट तर काम पूँजीवादी वाटो तिर । यसको प्रभाव पूर्वी जर्मनी लगायतका देशहरुमा पनि प¥यो । पूर्वी जर्मनी, रुमानिया आदि जस्ता पूर्वी युरोपका कम्युनिष्ट सरकारहरुपनि नाम कम्युनिष्ट तर काम पूँजीवादी वाटोमा लाने हुन थाल्यो ।
प्रचण्डको लालकिल्ला चितवन कांग्रेसको कब्जामा, तीनवटै वडामा नेकपा बढारियो
काठमाडौं । उपनिर्वाचन भएका अन्य जिल्लामा सन्तोषजनक परिणाम ल्याउँदा सत्तारूढ नेकपाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृह जिल्लामा हार बेहोर्नुपरेको छ । खैरहनी नगरपालिकाका दुई वटा वडा र भरतपुर महानगरपालिकाको एउटा वडामा नेकपाले हार बेहोरेको छ । रेणु दाहाल मेयर निर्वाचित भएको भरतपुर महानगरपालिका–१६ मा नेपाली काङ्ग्रेसका उमेदवार अमृतराज हमाल निर्वाचित भएका छन् । चितवनकै खैरहनी–५ […]
उपचुनाव सशक्त बहिष्कार गर्न कार्यकर्तालाई विप्लबको निर्देशन, लगायो सरकारलाई प्रतिबन्ध
काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले केपी वली सरकारले घोषणा गरेको उपचुनाव सशक्त बहिष्कार गर्ने पार्टीको निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव विप्लवले भारतीय साम्राज्यवादले नेपाली भूमि कब्जा गर्दा र मुलुकमाथि राष्ट्रघात हुँदा पनि साम्राज्यवादको विरोध गर्नुको सट्टा जनतालाई झुक्याउन र सामाजिक दलाल फासिवादी सत्ता सुदृढ गर्न उपनिर्वाचनको नाटक मञ्चन गरिएको […]
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले कर्मचारीहरुको कार्यशैलीमा परिवर्तन नभएसम्म मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनै नसकिने बताएका छन् । मन्त्री यादवले सरकारले लिएको समृद्धिको राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा हुने गरी काम गर्न पनि मातहतका कर्मचारीहरुलाई सचेत गराए । बुधबार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको ३२ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय […]
एकीकृत जनक्रान्तिका आधारहरु